Kala beddelashada Xogta laga Samsung in HTC
Mid ka mid ah qaybta ugu walaaca badan ee casriga ah bedesheen waa argagax ka dhigaya in markii aad garowsato in aad leedahay si aad xisaabiso si ay u wareejiso ururinta xogta weyn kaydiyaa qalabka hore mid ka mid cusub. Fikradda ah in lagu casriyeeyo ah casriga cusub dhaldhalaalaan codadka rafcaanka ilaa wakhtiga ugu xaqiiqda ah isagoo kugu dul wareejiyo waagu xogta. Mase u dhexeeya laba qalab oo u shaqeeya hal madal ay ka yar adag marka la barbar dhigo bedelaan kuwa la dhufto ee kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan qalabka saxda ah, habka xogta kala iibsiga noqon kartaa niyad jebinaysaa oo wakhti dheer qaata.
Jidka ka Samsung casriga ah si ay u HTC wareejinta xogta laga xannibo by trolls badan haddii wadada isku caadiga ah waxaa la socda. Dhibaatooyinka in aad si joogta ah u la kulmaan inta ay socoto waxaa ka mid noqon kara:
• Waa in aad soo baxdo iyo rakibi Transfer Tool HTC ka Google Play Store ku saabsan qalabka Samsung.
• The Tool Transfer HTC ma taageeraan casriga ah HTC dambeeyay.
• Si aad u gudbiyaan xiriirada, waxaa loo baahan yahay in aad soo maraan habka waqti lumis ah syncing xiriirada aad la leedahay Google Xiriirada isticmaalaya Google nidaameed ka dibna iyaga dajiyaan in qalab HTC aad.
• waxaa laga rabaa in aad ku wareejin doonaa sawiradii iyo faylasha kale warbaahinta gacanta kaas oo noqon kara xarraaradda daal.
Xogta laga Samsung wareejiyo HTC One-Click
Haddii aad jeceshahay ee ka shaqeeya Android badan dhufto ee kale, Samsung iyo HTC waa laba magac aadan diidi karaa in la kala dooranayo. Macna ma laha inta rafcaanka waxaa codadka, waxaana uu dareensan sida kedis ah silsilad casriga ah, ma sahlana marka ay timaado xogta ka mid qalab wareejinta in kale. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu taliyay in la sameeyo sinecure hawshan waxaad Wondershare MobileTrans .
Inkastoo shirkadaha mobile ku siiyaan qalab si ay u gudbiyaan xiriirada, files macluumaadka kale sida Guda wac, fariimaha, sawirada iyo files warbaahinta si buuxda looma eego by qalabka sida. MobileTrans Waa mid ka mid software sida in dhammaan ma waxaad u si hufan.
Out of the biilasha telefoonka mobile badan soo bandhigay by Wondershare in qurxiyaan aad waayo-aragnimo smartphone, MobileTrans waa mid ka mid ah oo awood aad xogta ka mid qalab wareejiyo kale ee hal-click. Maqaalkani waxa ay higsaneysaa in ay aad u soo bandhigo in habka laga tegaya xogta ka Samsung in smartphone HTC.
MobileTrans U ogolaanaya in ay u gudbiyaan xogta ka Samsung in HTC qalab gacanta iyagoo isticmaalaya PC ah sida a go-u dhexeeya. Ma aha oo kaliya in aad wareejin karaan faylasha laakiin waxa kale oo aad dib kartaa xogta casriga aad aad kombuutarka inaad ammaan iyo xaqiijisatay iyadoo la isticmaalayo codsigan. Wondershare MobileTrans Sidoo kale awood u aad dib u soo ceshano xogta ka iCloud in telefoon kasta oo ay taageerayaan Android.
Marka la eego hoos ku qoran waxay leedahay Hanuuniye tallaabo-tallaabo oo aad raaci karaan si ay u isticmaalaan Wondershare MobileTrans si ay u gudbiyaan xogta ka Samsung in smartphone HTC:
Tallaabada 1. Download, rakibi iyo bandhigista Wondershare MobileTrans.
1. aad PC aad kala soo bixi kartaa version maxkamad free of codsiga dhawr ka liidato ama iibsadaan nooca buuxda ka bixisay in uu idin siinayo qiimaha aad lacag.
2. Ka dib markii ay soo degsado, gashato aad kombuutarka.
3. Laba-guji la bilaabay barnaamijka.
4. Ka interface furay, riix Phone in Transfer Phone button in la furo suuqa kala iibsiga.
Fiiro gaar ah : isilowsii waano ah si loo soo dajiyo Lugood aad kombuutarka sida aadan wareejinta ama ka qalab macruufka ah.
Tallaabada 2. Isku aad casriga ah Samsung iyo HTC in aad PC.
1. Isticmaalka fiilooyinka USB, xirmaan labada casriga ah si aad u PC.
2. Marka xiran, si loo hubiyo in cagaaran xiran icon hoos ku calanka labada casriga ah ee u muuqataa on interface ka.
3. Hubi in Samsung iyo qalabka HTC waxaa lagu soo bandhigay hoos Source iyo meel loo ahaadana iyadaa qaybaha ay u kala horreeyaan.
Fiiro gaar ah: Haddii ay dhacdo haddii kale waa, riix Flip button jooga u dhexeeya labada walxood si ay u beddelaan jagooyinka qalabka '.
Fiiro gaar ah : Haddii aad rabto in aad tirtirto xogta hore ka qalab HTC ka hor initializing habka xogta kala iibsiga, ka fiiri macluumaadka oo cad ka hor inta nuqul checkbox ka hoos ku qoran qaybta caga hor Socota.
Tallaabada 3. xog Transfer ka Samsung in HTC
1. Ka dib markii labada telefoonada yihiin kuwo si fiican ugu xiran, iyo dhammaan noocyada xogta transferrable ku qoran yihiin oo u dhexeeya labada qalab ee Select content in aad nuqulka sanduuqa, hubi checkboxes matalaya files xogta in aad rabto in lagu wareejiyo ah.
2. Marka la doortay, riix Start Copy button hoos ku Select content in aad nuqulka sanduuqa laga bilaabi karo habka kala iibsiga.
3. Sug ilaa hanaanka wareejinta dhameystiray, iyo mar ay qabato, riix OK ee suuqa kala pop-up ah.
Fiiro gaar ah : Waxaad carqalad ku keeni karaan hanaanka wareejinta waqti kasta ee u dhexeeya adigoo riixaya Cancel button dhankiisii ​​midig hoose.
10 Inta badan Popular HTC Devices ee USA
Eye doonayay oo 1. HTC
2. HTC Mid ka mid ah - M8 (16 GB)
3. HTC Mid ka mid ah - M9 (32 GB)
4. HTC doonayay oo 816
5. HTC doonayay oo 820
6. HTC doonayay oo 616
7. HTC Mid ka mid ah - E8
8. HTC doonayay oo 620
9. HTC doonayay oo 610
10. HTC Mid ka mid ah - M8 (32 GB)
> Resource > Android > Sida loo kala iibsiga xogta ka Samsung in HTC